JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရစစ်တပ် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ဗမာအစိုးရစစ်တပ် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး
နိုင်ဝင်ဘာ (၂၉) ဗုဒ္ဓဟူး
ကေအိုင်အိုအစိုး ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မူဆယ် - မုံကူးလမ်း ဖိုင်ကွန်ကျေးရွာရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းကို ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခလရ (၂၄၀) မှ နိုင်ဝင်ဘာ (၂၈) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၃း၄၀) နာရီခန့်တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှပါသည်။ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၆) လက်အောက်မှ မျိုးချစ် ပြည်သူ့စစ် ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များသည် နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ မနက် (၈း၃၀) နာရီအချိန်တွင် တိုက်ပွဲပြင်စထန်စွား ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှာ အထိနာခဲ့သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် စခန်းရှိ အိမ်ခြေ (၅၀) ကျော်မီးလောင် ပျက်စီးသွားကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ဖိုင်ကွန်ကျေးရွာမှ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင် ရွာသားများကို စုဆောင်းထားပြီး မေးမြန်းနှိပ်စက်ခဲ့ ကြောင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကို ပြန်လည် လွှတ်ပေး ခဲ့သောလည်း၊ အမျိုးသား (၂၀) ကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Burmese government’s soldiers burnt Kachin refugee houses in Hpai Kawng village, it is located between Muse and Munggu road, which is under KIA (4th) Brigade area, Western Shan state, on 28th November according to the KIA front line officer report. At 08:30 on that day, there wasaseveral battle between KIA patriotic soldiers from (26) battalion and Burmese infantry unit (240). In that battle, many Burmese soldiers were died and injured, thus at 03:40 PM the Burmese soldiers burnt the Hpai Kawng Kachin refugee camp and over (50) houses were burnt. Moreover, they arrested the Hpai Kawng villager in the church, inquired and beat the villagers those who had been arrested. Later, Burmese soldiers released women at the evening time, but they still arrested (20) villagers in the church.
laika bai ka sharai ra nga ai le...
tsit tsawmbum said...
nau nchye na ai le.nhtoi ni mung shut taw nga ai.မျိုးချစ်ပြည်သူ့စစ်ဗမာအစိုးရရဲဘော်များနဲ့ဗမာ
အစိုးရစစ်တပ်များ nga ai gaw gara hku rai taw ai kun?
Wunpawng sha ni yawng tinang mungdan de wa nna amyu hpe mungdan hpe, tinang dum nta masha ni hpe makawp maga sa ga law.
Jinghpaw kasa hpe Eng laika hte shiga hpe mara ya ai majaw chyeju kaba.
Shi ga n-nan hti myau ai.